China SEBIC 700c yepakati mota hydraulic mabhureki emugwagwa guta emagetsi bhasikoro fekitori uye vagadziri | Kusekerera
Saizi ye Wheel ZVIMWE
Motokari Brushless, 36V 200W Mid Mota-Bafang M800
Range paPower 10 - 30 km
Model Nhamba BEF-EEL700M
Chimiro 700 * 28C aruminiyamu chiwanikwa 6061, TIG welded
Forogo Aluminium 700C, TIG yakasungwa
Tire INNOVA 700 * 28C A / V Nhema
Gear Set 9 kumhanya
Bhatiri 36V 7.8AH, Lithium Battery, iine 2A charger-SANS
Mutungamiriri Sine Wave Mutongi akabatanidzwa mune mota
Yakakwirira mhando: Nokubatanidza hunyanzvi hwedu muE-Bikes neese-e-iyo-zvigadzirwa kubva kuShimano, Tektro uye zvimwe zvepamusoro mabhasikoro emabhasikoro, isu tinotarisira kukuunzira iwe wakanyanya kukosha magetsi emagetsi emabhasikoro pamusika.
Chimiro uye Kumiswa: Yakagadziriswa kubva pachikuva chimwe chete seMonta, inonyanya kufarirwa bhasikoro remagetsi emakomo. Iyo aluminium alloy furemu uye inokiyiwa kumberi kuturika zvakagadzirwa zvakaomarara uye kuyedzwa. Iyo Monta X ichiri musanganiswa wakakwana wehuremu hunorema, hwakanakisa-panzira nzira, uye mukurumari.
Battery uye mota: Yakashongedzerwa neinoramba ichienderera 250W maviri mota, iwe uchashamisika nekuita kwayo mukukwira makomo uye kubata nemhando dzakasiyana (dzakasiyana) dzemumigwagwa. Iwo maviri anobviswa Samsung 36V lithium mabhatiri anobvumidza iyo yakareba uye ine simba rine simba kukwira. Iyo yakavakirwa-mukati USB chiteshi mubhatiri inoita kuti iwe ugone kubhadharisa ako smart zvigadzirwa panguva yekufamba.
Kutasva Kuchinjika: Shimano shifter, crank uye derailleur inoona shanduko inotsvedza pakati pemagiya akasiyana. Iyo 14-34T Mega Range Cassette inoita kuti zvive nyore kwauri kuti ukwire makomo uye uishandise kune zvisiri-munzira zvinangwa. Pamusoro pechigunwe kubvongodza, mashanu mazinga epeduru-anobatsira akagadzirirwa kugutsa zvaunoda panguva yega yega kukwira.
Yakavimbika Kumisa Tekinoroji: Seyakanakisa yekumisa tekinoroji mumusika, Tektro disc mabhureki anovimbisa kuchengetedzeka kwako neyakaganhurirwa bhureki sensor yekucheka simba kana uchinge wadzima bhureki.
Ratidza uye Chiratidziro: Iyo iratidziro yemwenje yeLCD inoratidza iwe ruzivo rwese iwe rwaunoda panguva yekufamba, sekumhanya, pedal-assist level, bhatiri danho, rwendo rwendo, nezvimwe.Monta zvakare ine yakagadzirirwa nemwenje we LED uye LED kumashure flasher, kuona yako chengetedzo kana iwe uchida kufamba pakati pehusiku.
Pashure: SEBIC 26 inch mafuta egomo tiresnow beach gungwa mid drive mota yemagetsi bhasikoro
Zvadaro: SEBIC 20 inch aluminium yakavanzwa bhatiri kupeta emagetsi bhasikoro